Andron’ny boky eran-tany: ny fiainan’ny vehivavy ao anatin’ny fitaratry ny lehilahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2009 12:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, srpski, македонски, عربي, English
Maro ny lehilahy eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, hatrany am-boalohany ka hatrany am-parany: «ray, raibe, zanakalahy, anadahy, olon-tiana, vady, sefo, mpiara-miasa»…Misy ny eo, ao ny adino, misy ny mandeha, ny sasany mbola eo amin'ny fomba tsy fantatra, manintona na mampijaly, miova, mijanona, manova zavatra; ary, ireo rehetra ireo mitambatra, ny sariny sy ny zavatra omeny no maneho azy kokoa noho ny mety ho vitan'izy tenany, ny vehivavy manapaka ny làlany, ao anatina tantara sarotra sy azy ireo manokana, mahavaky fo sy manainga fanahy, mampihomehy sy tsotra, mandini-tena sy manazava ny tantara sy ny fiaraha-moniny azy manokana.
i Denise Bombardier no voalohany tao amin'ny lisitry ny fitrandrahan ananako, mpanao gazety, mpanoratra tantara, mpanoratra tonokalo ary olon'ny haino aman-jery avy any Quebec, fanta-daza amin'ny hoe fahaizany mitatitra amin'ny vaovao sy ny fampiasany eson-teny. Ao anatin'ny «Nos hommes» (1995) nanoratra izy, toy ny nomarihin'i Nicole Savard ao amin'ny blaoginy momba ny literatiora[Fr]:
Zavaboahary izay manainga fanahy anay isan'isany ny lehilahy hoy izy, ny tsirairay amin'izy ireo izay endriky ny iray hafa kosa. Fanampin'izany, ny lehilahy no olona manasongadina antsika vehivavy. Tonga amin'izao maha-izy azy izao izy ireo araky ny naniriantsika azy: tia, olon-tiana, mafana fo, namana, mahay miasa, manintona, ary indraindray mampijaly, ary matetika matahotra ny fahefan'ny vehivavy ampiaharina aminy. Farany, sarin'ny tian'ny vehivavy omena azy ireo lehilahy ireo, na eritreretiny hoe ” very fanantenana amin'ny maha-izy azy”.
Asehon'i Camille Laurens [Fr] ny firehana ara-kevitry ny haisoratra frantsay, antsoina hoe «autofiction», mampiaraka ny tantaram-piainan'ny mpanoratra sy ny famoronana. Tamin'ny taona 2000 izy no namoaka ny «Dans ces bras-là» («teo amin'ireo sandry ireo»), izay nahazoany ny loka Femina, boky tian'ny [Fr] ballerines ou converses :
Ny lehilahy. Lohateny toy inona! Mahaliana. Mampalahelo ahy ny nahavehivavy ahy raha namaky ireto andinin-tsoratra ireto aho. Tiako ery ny ho lehilahy mba hahafahako mahalala ny zava-misy ao anatin'ny kibon'ny vehivavy manoloana antsika, nefa vehivavy ao, tsy misy afa-tsy ny mandray ny làlan-tsarotra nodiavn'ny mpanao tantara teo amin'ny fitiavana. Fa misy foana izany tantaram-pitiavana iray miaraka amina lehilahy izany – na izy ray, na raibe, na zanakalahy, na olon-tiana, na vady, na sefo, na mpiara-miasa.
Ny tena tiako tsy am-pisalasalana anefa ny Ireo Lehilahiko nosoratan'i Malika Mokkedem, mpanoratra Alzeriana mipetraka any frantsa, toerana nianarany ho dokotera ary nampiharany ela ny fahaizany momba ny voa, talohan'ny nanokanany ny fotoanany ho amin'ny haisoratra.
Zanakavavin'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mpifindra monina matetika avy any Atsimon'i Alzeria, vitany ny niady tamin'ny vesatry ny fomba amam-panao sy ny fianakaviany ho an'ny fiainany mahaleo tena; ary niaraka tamin'ny hery miredaredan'ny finiavana, nanjary tonga amin'izao zavatra notadiaviny izao izy. Nanoratra izy hoe [Fr]:
Niala tamin'ny raiko aho mba hianatra ny fomba hitiavana ny lehilahy, kaontinanta tena masiaka, satria tena mbola vaovao amiko…. Nampiarahako na nampiadiako taminy ny tenako. Mamalona ny zavatra rehetra ilaiko tadiavina izy raha mbola ahazoako fahalalahana.
Mavitrika i La muse agitée, mpampiasa ny blaogin'i the Vallauris bookshop [Fr]:
Ity ny “kara-pandihizan” i Malika Mokkedem, izay mamaha ny sarotra tamin'ny fiainany tpy ny hoe nosokafanao avy any anaty vta sarihan'ny rakitry ny ela. Mivalona ao ny fahazazany tamin'ny maha zazavavy kely Alzeriana azy izay tsy manan-danja firy noho ireo anadahiny, ary nangatahana mba ho tsy hisehoseho araka izay azo atao, ny hatanorany tamin'ny nahatovovavy azy nahita tany anaty boky sy torolalana avy amin'ny varavarana misokatra ho amin'ny fahalalahana, vehivavy tanora nangetaheta fitiavana , mahaleo tena sy tapa-kevitra , vehivavy narafitry ny ratrany, ny kolontsainy, ny hatezerany, ary ny faka lalin'ny fanekena.
Ireo olona nomeny lanja manokana sy nanampy azy no lehilahy teo amin'ny fiainany, ireo niadivany, ireo niarahany natory, ireo nanaovany firaisana. Ny dindo mamin'izy ireny tavela teo amin'ny fiainan'ny mpanoratra arahana hery mifanindran-dàlana sy fahadisoam-panantenana mirehidrehitra. […]
Vakiana toy ny tantaram-piainana ny boky, toy ny testamenta, toy ny tsiambaratelo, karazana felaka eo amin'ny endriky ny rafitra napetraka, ny tsy fahalalana sy ny faneriterena,ny fahamarinana mahitsy izay tsy manasazy, nefa kosa mamono ny ho avy ao anatin'ny fanantenana tsara ho an'i vehivavy Alzeriana. […]
Ity olana sedrain'ny vehivavy ity dia mitondra antsika hiarahaba an'i Assia Djebar, Alzeriana mpanoratra tantara izay sady mpandika-teny ihany koa, mpamokatra horonantsary sady mpampianatra haisoratry ny tany miteny Frantsay any amin'ny Anjerimanotolo any New York, iray amin'ny vehivavy vitsy voaray tany amin'ny Akademia Frantsay. Anisan'ireo asa-sorany maro malaza sy voavaky tsaroana ny L'Amour, la Fantasia (1985), sy ny Femmes d'Alger dans leur appartement (2002). Eo amin'ny blaoginy Le bateau libre, kiana amin'ny asa-soratra no nilaza i Frédéric Ferney , momba ny bokiny farany Nulle part dans la maison de mon père («N'aiza n'aiza ao an-tranon'ny raiko», 2007) [Fr]:
Ny lohateny dia sady toa fandàvana no fieken-keloka, mitazona ny teny nomeny izy.
Fa angaha ny fihalehibeazana midika, mianatra mamaly? Ahoana no fomba itomboanao tsy mivadika (sy mamita-tena)? Ahoana no azonao itokisana ny tenanao nefa tsy manosika ny hafa? Manana ireto teny ireto i Assia Djebar : «Manao veloma amin'ny tenany», izay azon'ny tsirairay raisina arak'izay itiavany azy.
Ny tena itovian'ny mpanoratra Alzeriana mampiasa ny teny Frantsay matetika dia ny fombany, ny hareny sy ny fahavelomany, ny heriny sy ny tsy fanasiana fifangaroan-teny, eo koa ny fahasahiana amin'ny lohahevitra. Noho izany, farany na ahoana na ahoana ny fihetsiky ny lahatry ny vehivavy, mahatsiaro voatery aho ny hamarana ity resaka fohy ity miaraka amin'ireto boky savaranonando ireto izay nosoratan'i Yasmina Khadra (anarana mpanoratra ho an'ny lehilahy, mba hialana ny sazy miaramila nandritry ny ady sivily Alzeriana), ny Wolf Dreams (1999), The Swallows of Kaboul (2002) The Attack and The Sirens of Baghdad (both 2006), ao anatin'ny maro, izay manana tanjona ny «hanome vintana ny mpamaky any andrefana hahazo ny tena olana izay matetika miantraika aminy mivantana [izany hoe,ny fanarahana anjambany].
Bebe koka momba ity mpanoratra mahaliana ity ato amin'ireto blaogy ireto : Un oeil sur la planète, sy Cocola's [Fr].